Hagaha Naftalan Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hotels Friendly Hotels
Magaalada Naftalan waa meel caan ku ah dalxiiska batroolka, xarunta dalxiiska caafimaadka Azerbaijan. Waxaa ku jira Naftalan saliid nafaqeyn u gaar ah oo aan laheyn analologyada adduunka. Waa dareeraha dareeraha leh oo leh midab madow iyo bunni iyo midab bunni ah iyo ur gaar ah. Kali ahaanshaha iyo waxtarka sare ee saliidda nafaqada waxaa lagu xaqiijiyay daraasado cilmiyeed oo fara badan iyo in ka badan 100 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan daaweynta cudurrada kala duwan.
Maaddaama loo dalxiis tago Naftalan waxaa loo yaqaan tan iyo 1926, markii ay u muuqdeen goobo madadaalo iyo caafimaad gaar ah oo hareeraha garoonka ah. Bukaanno ka kala yimid dhammaan Midowgii Soofiyeeti ayaa halkan yimid. Maanta Naftalan waa xarun casri ah oo firaaqo iyo caafimaad leh, oo si dabiici ah isugu darka arrimaha dabiiciga ah, guulaha laga gaaro daawada dalxiiska, raaxada Yurub, martigelinta Azerbaijan iyo qiimaha la awoodikaro ee dalxiisyada.
Iyada oo qayb ka ah barnaamij ballaaran oo dawladeed oo ku saabsan soo kabashada Naftalan waxaa jiray afar sanatorium oo heerarka yurubiyanka ah laga dhisay halkaas saddex kalena waxay ku jiraan hawsha dhismaha. Waxyaabaha la yaqaan waxaa ka mid ah: xarunta caafimaadka-ka-hortagga ee Chinar Hotel & Spa, xarunta caafimaadka “Naftalan”, sanatorium “Gashalty” iyo kuwo kale.
Waxay ku taal meel 330 km galbeed ka jirta Baku iyo 50 km u jirta Ganja, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka.
U duuli Naftalan
Naftalan Hava Limani waxay u adeegtaa duulimaadyo gaar ah oo taga magaalada.
Adeegyada basaska caadiga ahi waxay ku xidhaan magaalada weed iyo Baku.
Jidka weyn ee M2 u leexo R25
Magaaladu aad ayey uyar tahay, sidaa darteed si fudud ayaa loogu sahmin karaa lug ahaan.
Chinar Hotel & SPA waxay leedahay ururinta farshaxanka gaarka loo leeyahay. Waa kuwan waxa aad isku dayi karto inta lagu jiro nasashada inta u dhexeysa kal-fadhiyada firaaqada iyo bannaanka “darbiyada dalxiis”
Qoltuqağacı muzeyi (Matxafka ulaha). Kaliya madxafyada curyaaminta adduunka. Halkan waxaad ku arki kartaa boqolaal ulood oo nashqado iyo cabbirro kala duwan ah. Halkaan ayaa looga tagay waxaana saxeexay kuwa imaada goobta loo tamashle tago ee aan lugoyn karin ulo la'aan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi (Matxafka Taariikhda iyo Daraasaadka Gobollada), AZ4600, Naftalan, Naftalan, Şirvan, dalan 1. Mowduucyada soo socda ayaa ka mid ah kuwa lagu soo bandhigay carwada Madxafka Taariikhda iyo Daraasaadka Gobollada: dhirta iyo duunyada gobolka, macdanta, cilmiga dhulka dhulka, asalka iyo taariikhda magaalada, qawmiyadaha, numismatics iyo horumarka magaalada oo ah goob caafimaad. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Heydər Əliyev Muzeyi (Matxafka Heydar Aliyev), Shikhali Gurbanov Str., Naftalan (dhexdeeda beerta nasashada). Matxafka oo la aasaasay 2006, wuxuu kakoobanyahay in kabadan 200 sawir iyo bandhigyo matalaya nolosha iyo shaqooyinka "hogaamiyaha qaranka" Heydar Aliyev. Kuwaas waxaa ka mid ah wareegto, uu soo saaray "hoggaamiyaha weyn" 1982, kuna saabsan horumarinta Naftalan oo ah magaalada dalxiiska. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Heydər Əliyev parkı (Xeydar Aliyev Park). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bandhigyo iyo dhacdooyin
Heydər Əliyev Mərkəzi (Xarunta Heydar Aliyev), Xeydar Aliyev Park. Dhammaan munaasabadaha ugu waaweyn ee ugu sarreeya halkan ayaa lagu martigeliyaa. Hoolka shirarka oo leh 120 kursi, maktabad elektaroonig ah, koorsooyin ku saabsan luuqadaha qalaad, qol kombuyuutar, fanka farshaxanka, iyo qol shirar yar. Galitaan bilaash ah (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Dadku waxay booqdaan Naftalan si ay u horumariyaan caafimaadkooda. Marka saliida-spa waa waajib in wax la qabto. Sanatoriums iyo Spa-Hotels ayaa ku jira heer sare, markaa waxaad si hubaal ah ugu raaxeysan doontaa waqtigaaga.
Dhammaan makhaayadaha ugu sarreeya ee ku yaal hudheelada hudheellada iyo 'Sanatoriums'. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira meelo wanaagsan oo ka baxsan aagga dalxiiska.
Halkee lagu hayaa Naftalan
Chinar Hotel & Spa, 12 Shirvan ave., Naftalan city AZ 4600. Dalxiis heer sare ah (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Qashalti Sanatorium, 37 Shirvan Ave .. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Naftalan Sanatorium, 31 Shirvan ave. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal Azerbaijan > Hagaha Naftalan Xalaal
Hotel Mövenpick Münster	   